Akpaaka na Marketingzụ Ahịa Digitalzụ Ahịa | Martech Zone
Akpaaka na Marketingzụ Ahịa Digital
Anyị debere ozi infographic na Mass Marketing na nkeonwe nke ahụ kwuru banyere uru nke nkwukọrịta ahaziri maka ogbe na azụmaahịa ụdị egbe. Pardot emeputala ihe omuma ndi a na-agwa Ahịa akpaaka na nkeonwe.
Iji nwee ihe ịga nke ọma n'ahịa juru ebe niile taa, ndị na-ere ahịa kwesịrị ịhazi ọrịre ahịa ha na ahụmịhe weebụ maka ndị ahịa ha na atụmanya ahịa otu. Otú ọ dị, dị ka a ihe omumu ohuru site na Econsultancy, ọtụtụ ndị na-ere ahịa na-agba mbọ iji mejuputa nkeonwe na mbọ ahịa ahịa dijitalụ ha.
Otu ihe dị mma nke sistemụ azụmaahịa azụmaahịa bụ ikike ịnakọta data kpọmkwem site na atụmanya yana ịdekọ omume ha karịa oge. Nhazi nke ulo akwukwo ochie choro otutu ndi mmadu nke nwere otutu onu ogugu. N'iji akpaaka ahia, ị nwere ike ijide data ahụ nwayọ ma gaa n'ihu na-edozi mkpọsa gị, na-eme ka ha nwekwuo atụmanya ka ị na-amụtakwu banyere ha. Nke a na - ebelata ịgbahapụ ma na - abawanye mgbanwe ntụgharị.
Tags: akụrụngwa ahịankwukọrịta ahịamgbagharakeonwe
Ihe mere vidiyo vidiyo azụmahịa gị kwesịrị iji dị na Vimeo